နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Android ဖုန်းတွေအတွက် Custom ROMs များ ကို ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လို အပ် တာလဲ
Android ဖုန်းတွေအတွက် Custom ROMs များ ကို ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လို အပ် တာလဲ
Post by Myo Thu Htet
Android custom ROM တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍ အကြောင်းကို အမြဲတမ်းသိချင်နေခဲ့တာလား ?
market ရဲ့နောက်ကွယ် က သင့်ဖုန်းကို custom upgrade လုပ်ခြင်းအကြောင်း ဆိုတာဘာလဲ?
ဘယ်သူတွေလိုတာလဲ? ဘာအတွက်လိုတာလဲ? စိတ်ချရရဲ့လား?
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါတွေကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ROM ဆိုတာက Read Only Memory ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ ROM ဆိုတာက သင့်ဖုန်းရဲ့ ROM Area မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့၊ စိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ထားတဲ့ OS Image ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Stock ROM ဆိုတာကတော့ ဖုန်းဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းနဲ့အတူ ပါလာတဲ့ ဖုန်းရဲ့ OS Version ဖြစ်ပါတယ်။
kernel ဆိုတဲ့စကားလုံး ကတော့ OS ရဲ့ နှလုံးသား လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ OS ရဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုပေါ့။
Custom ROM ဆိုတာ ကတော့ OS ရဲ့ Standalone Version ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး Kernel လည်းပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Kernel ဆိုတာက ဖုန်းမှာပါတဲ့ Application တွေ၊ Services တွေ နဲ့ တခြား ဖုန်းအလုပ်လုပ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့အရာမှန်သမျှကို Run ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပြီး OS ရဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ OS ရဲ့ နှလုံးသား လို့ တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Custom ROM မှာပါတဲ့ Kernel ကိုတော့ Developer က သူ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒါဆို … စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင် တယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကဘယ်လိုလဲ?
ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ Android က Open Source ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Developers တွေက Stock ROM တွေကို Free ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ Stock ROM တွေကို သူတို့စိတ်တိုင်းကျပြုပြင်တယ်။ သူတို့ ဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်တယ်။
Custom ROMs တွေကို ဘာလို့လိုအပ်တာလဲ
Custom ROM ကို အသုံး ပြု ခြင်းအားဖြင့် Bugs တွေကို Fix လုပ်ထားတဲ့ Updates တွေ နဲ့ Features အသစ်တွေကို အမြဲတမ်းရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Features အသစ် တွေ ဆိုတာကိုပြန်ရှင်း ရရင် အခု ဗားရှင်း 2.3.3 မှာဆိုရင် flash ကို support လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က 2.3.3 ROM ကိုလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါပေမယ့် တချို့ devices တွေအတွက် 2.3.3 က official မထွက်ပါဘူး။ဒီအတွက် 2.3.3 Custom ROM ကိုလိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်)။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ ROM ကိုထုတ်တဲ့ Developer ဟာ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်စရာမလိုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ ROM developer တယောက်ဟာ project manager တွေ marketing department တွေ နဲ့ စုပေါင်းပြီး အစည်းအဝေး ထိုင် နေစရာမလို လို့ အမြဲတမ်းပိုကောင်းတဲ့ update တွေကို မြန်မြန် ထုတ်ပေးနိူင်တယ်။
developer ဟာ သူထုတ်လိုက်တဲ့ update ကို စမ်းသပ်သုံး စွဲတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ကနေ feedback(ပြန်ကြားစာ) တွေရတယ်။အဲ့ဒီပြန်ကြားစာတွေ ကနေ bugsတွေကို ပြန်ပြင်တယ်။ Error တွေပြင်တယ်။ ဒါက လည်း open source software ရဲ့ အားသာချက် တခုပါပဲ။
ROM တွေကို များသောအားဖြင့် Free ရတယ်။ မပေးလို့လည်းရတဲ့ Donation တွေနဲ့ Support လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ခင်ဗျားပေးချင်စိတ် မရှိရင် မပေးဘဲနေလို့ရပါတယ်။
Custom ROM အများစုဟာ OTA(over the air) ကနေupdate လုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဘာကိုမှ reinstall လုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့။
ကဲဒါဆို ဘယ်သူက open source ကို မကြိုက်ပဲနေမှာလဲ?
Custom ROM တွေဟာ မြန်တယ်၊စွမ်းရည်ပိုကောင်းတယ်၊memory အစားနည်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့
developer က အသုံးမဝင်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ဖယ်ထုတ် လိုက်တယ်။အမှိုက်ဆိုတာက carrier က install လုပ်ထားတဲ့ application တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။( Sony Ericsson မှာဆို Latitude တို့ Track ID တို့ Road Sync တို့ပေါ့ )
နောက်ပြီး Developer ကသူ့ရဲ့ Kernel ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။ ဥပမာ သူ့ Kernel ရဲ့ Stock ROM က Battery ထက် သက်တမ်းပိုခံတာမျိုးပေါ့။
ပိုကောင်းသော Version သို့ Upgrade လုပ်ခြင်း
ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ device အတွက် တရားဝင် official release မထွက်သေးတဲ့ version ဒါမှမဟုတ် ဘယ်တော့မှထွက်လာမှာမဟုတ်တဲ့ version ကို upgrade လုပ်လို့ရပါတယ်။ ( ဥပမာ Sony Ericsson ဆိုရင် Sony ကထုတ်တဲ့ official release မဟုတ်တဲ့ version ပေါ့။ ပြောရရင် X 10 mini အတွက်ဆိုရင် version 2.1 ပဲထွက်ပေးထားတယ်။ဒါကို ခင်ဗျားက 2.3..3 ကို upgradeလုပ်ချင်တဲ့အခါ official release မထွက်သေးတဲ့အတွက် ခင်ဗျားရဲ့ ဖုန်းနဲ့ သင့်လျှော် တဲ့ Custom ROM ကို သုံးရမှာဖြစ်တယ်)
ROM အသစ်တခု က online မှာထွက်လာပါတယ်။အစားမက်တဲ့ ဖက်တီးလေးတယောက် ရေခဲမုန့်လှည်းနောက်လိုက်သလို developer ကလည်း အဲ့ဒီ ROM ကိုရအောင် online မှာလိုက်ရှာပါတယ်။ဒါက Hero and Android 2.1 ရဲ့အဓိကပြဿနာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ official version မထွက်ခင် ဆယ်ရက် အလိုကတည်း က custom ROM ကို upgrade လုပ်ခွင့် ရ တဲ့အတွက် stock OS တွေက အလိုလိုနေရင်း ချောင်ထိုး ခံလိုက်ရပါတယ်။
အခြားဖုန်းတခုက ROM ကို မင်းရဲ့ဖုန်းမှာ သုံးလို့ရအောင် developerကလုပ်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် G1 and My Touch 3G အသုံးပြုတဲ့သူတွေဟာ Android 2.1 ရဲ့official ဗားရှင်းကို သူတို့ဖုန်းမှာဘယ်တော့မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်တုန်းကထွက်မလာခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါပေမယ့် Android developer တွေထဲကနံမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Cyanogen က Android 2.1 အသုံးပြုထားတဲ့ custom ROM တခုကို G1 and My Touch 3G မှာသုံးလို့ရအောင် developed လုပ်ပြီးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့က G1 and My Touch 3G အသုံးပြု တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပျော်စရာနေ့လေးတရက်ပေါ့ ။
Application တွေ ကို SD Card ထဲသို့ Install လုပ်နိူင်ခြင်း
အခုနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ custom ROM အများစုဟာ application တွေကို SD card ထဲသို့ install လုပ်လို့ရတဲ့ Apps2SD or A2SD ဆိုတဲ့ application တခုပါလာပါတယ်။ A2SD က ခင်ဗျား application အများကြီး install လုပ်ချင်တဲ့အခါ၊ ဖုန်း memory ပြည့်နေတဲ့အခါမှာ ၊ဖုန်းထဲက application တွေကို SD card ထဲ ရွှေ့ချင်တဲ့အခါအလွန်အသုံး ဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ application ဟာ stock ROM တွေမှာ၊အခုနောက်ထွက်တဲ့Android 2.1 မှာ support မလုပ်ပါဘူး။
Custom ROM တွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ခြင်း
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် custom ROM တွေကို အသုံးပြုရာ မှာလည်းရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
Flashing (ROM ကို Install လုပ်ခြင်း) လုပ်နေစဉ်မှာ ချို့ယွင်းချက်တွေရှိနိူင်ပါတယ်
။.အဆိုးဆုံးကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ဖုန်းကို သုံးမရတဲ့အနေအထား ထိရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဒီလိုဖြစ်နိုင်ချေ တော်တော်နည်းသွားပါပြီ။ မူရင်းအခြေအနေကို Restore ပြန်လုပ်ဖို့လည်းလွယ်သွားပါပြီ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Positive Feedback အများဆုံးရှိတဲ့၊
လူတော်တော်များများစမ်းသပ်ပြီးတဲ့ ROM တွေကိုသာ သုံးသင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။
Custom ROM တခုကို install လုပ်ဖို့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးclean wipe လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
clean wipe လုပ်လိုက်ရင်တော့ ရှိသမျှ data တွေအကုန်လုံး ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံး မှာပေါ့။ဒါကြောင့် clean wipe မလုပ်ခင်မှာ ရှိသမျှ data တွေကို back up အရင်ဆုံးလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖြစ်လာနိူင် တဲ့ပြဿနာများ
Custom ROMs တွေမှာ error တွေ bugs တွေရှိနိူင်ပါတယ်။ဒါတွေက stock rom တွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကယ်၍ ခင်ဗျား က bug တခုကိုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ROM forum မှာ အကူအညီ တောင်းနိူင်ပါတယ်။သူတို့က ခင်ဗျားရဲ့ bug နဲ့ပါတ်သက် ပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေ ကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
custom rooting လုပ်ခြင်းက boot loader အပိုင်းမှာပါရှိတဲ့ seal ကိုဖျက်ဆီး လိုက်တဲ့အတွက် ခင်ဗျားဖုန်းရဲ့ အာမခံ ကို ပျက်စီး စေနိူင်ပါတယ်။seal ပျက်သွားတာ ပြန်ပြင်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့် ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေ က သင် တကယ်လို့ custom ROM ထည့်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ အာမခံပျက်စီး မယ်ဆိုတာကို ပြောပြ ထားပါတယ်။
မှန်ကန်သောCustom ROMကို ရယူခြင်း
ဖုန်းအသစ်တွေထွက် တာနဲ့အမျှ ROM အသစ်တွေလည်း တပြိုင်နက်ထွက်လာပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဘယ်ဖုန်း က ဘယ် ROM နဲ့ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြော မှာမဟုတ်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ Google မှာ ဖုန်း ရယ် MODEL ရယ် ROM ရယ် ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Android version ရိုက်ပြီးရှာကြည့် ရင်တော့ သင်လိုချင်တာရနိူင်ပါတယ်။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 2:40 PM